Shixnadaha Logo Daabacan Sanduuqyada Hadiyadaha Kartoonada Jumlada ah oo leh Soosaaraha Ribbon iyo Alaab-qeybiye | Huaguang
Logo Gawaarida Daabacan Sanduuqyada Hadiyadaha Kartoonada Jumlada ah oo leh Ribbon
Cabir: 18 * 16 * 13cm
Daabacaadda, waa badeecooyin kala duwan oo daabacan, oo ku dhowaad ka buuxa dharka dadka, cuntada, guryaha, safarka berrinka, iyo nolosha dadka oo aad ugu dhow. Waa maxay qiyaasta qaybo ka mid ah qaybaha nool? Ma aha oo kaliya in la arko in midabka daabacaaddu ay waafaqsan tahay shuruudaha, laakiin sidoo kale in la arko haddii qaybtan khadadka nool ay xasilloon tahay. Maanta, Iyada oo ku saleysan sanduuqa hadiyadeed, waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago dhowr arrimood oo saameeya xasilloonida midabka khadku:
Saamaynta muuqaalka leh ee midabka khadku waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee lagu cabbiro tayada arrinta daabacan. Midab midab lebis ah, midab sax ah oo dhalaalaya iyo midab iswaafaqsan ayaa ah shuruudaha aasaasiga ah ee tayada arrinta daabacan. Fahamka saxda ah ee tayada daabacaadda midabka khadku wuxuu muhiimad weyn u leeyahay xakamaynta saxda ah ee daabacaadda midabka khadadka iyo hagaajinta tayada daabacaadda ee alaabada daabacaadda midabka.
Haysashada heerkulka iyo huurka oo joogto ah waa mid aad muhiim u ah in la hubiyo xasilloonida khadka. Daabacaadda inta lagu jiro xagaaga, sababtoo ah heerkulka cimilada ayaa sarreeya, sidaas darteed qalabka daabacaadda daabacaadda ayaa si fudud u fududeynaya, iyo kordhinta waqtiga daabacaadda, daabacaadda waxtarka kaydinta khadadka, iyada oo ay jirto xaalad isku mid ah khad isku mid ah, tayada daabacaadda ee khadku wuu sii qoto dheeraanayaa, markaa habka daabacaadda si loo ogaado calaamadda cufnaanta, oo had iyo jeer la barbar dhigo muunadda la saxeexay, haddii loo baahdo si sax ah ayaa loo yareyn karaa qaddarka khadka, si loo daabaco loona saxeexo midabka muunadda.
Xilliga jiilaalka, maaddaama heerkulka guud ee deegaanku hooseeyo, heerkulka dhammaan qaybaha mashiinku wuu hooseeyaa marka mashiinka la bilaabo subaxa hore. Hawl wadeenada daabacaadu waa inay sameeyaan labada qodob ee soo socda ka hor intaanay bilaabin daabacaadda.
Marka hore, hagaaji heerkulka iyo huurka aqoon isweydaarsiga si aad uga dhigto heerka (heerkulku waa 20 ~ 24 ℃, huurka waa 60% ~ 70%).
Ta labaad, kuleylka kuleylka ama ku dar waxyaabo dheeri ah ama khad qalinka, si aad u kordhiso dhaqdhaqaaqa khadka, ka dibna kabaha.
Daryeelka deegaanka dartiis, sanduuqa hadiyadeed wuxuu hayaa midabka alaabta ceyriinka ah, marka heerkulku saameyn yar ama xitaa dayac buu ku leeyahay.
U fiirsashada xalka isha
Maalmahan madbacado badan ayaa la qaatay nidaam nooca waxbarashada otomaatigga ah, laakiin nooca loogu talagalay gacanta ku dar qurxinta dareeraha dareeraha madbacaddu waxay u baahan tahay hawl wadeenno hawlgal nooc waxbarasho oo wanaagsan ka hor bootka, tani waa sababta oo ah habka daabacaadda ee loogu daro biyaha iyo aalkolada iyo haanta biyaha ee bartamaha bannaanka qaar ka mid ah dareeraha nooca waxbarashada ee heerkulka iyo feejignaanta ayaa ka duwanaa, way fududahay in la keeno daabac wasakh leh, laakiin haddii aad rabto inaad ka saarto baahida wasakhda ah ee sabaynaysa ee ah in la kordhiyo tirada biyaha, biyaha nuugaya ayaa kordhi doona oo noqonaya kuwo fudud.
Intaa waxaa sii dheer, fiirsashada xalka isha waa inay la kulmaan shuruudaha daabacaadda, taas oo lagu cabbiri karo warqad tijaabo ah pH ama mitirka fiirsashada. Haddii fiirsigu aad u badan yahay, markaa khadku xaalad kasta ha ahaadee sidoo kale ma buuxinayo shuruudaha, khadkuna si dhakhso ah ayaa loo xoqin doonaa; Haddiise isku-urursigu aad u yar yahay, xaddiga biyaha lagu daro qaybo badan oo wasakh ah oo sabeynaya ayaa la tirtiri doonaa, isla markaana marka la dedejiyo daabacaadda, wasakhda wasakhda ahi waxay si fudud uga muuqan doontaa booska afka, kororka khadadka biyaha ayaa noqonaya mid gacmeed, sameynta wareeg xun, sameynta xasilloonida midabka khadku lama xakamayn karo.
Xakamee qadarka khadka
Preinking ka hor daabacaadda waa mid aad u muhiim ah. Ka dib marka midabka khadadka la hagaajiyo, saamiga daabacaadda ee caadiga ah, oo sidoo kale loo yaqaan muunad saxeexan, waa in marka hore la daabaco, ka dibna lagu dhejiyo miiska muunadda.
Tani waxay nooga baahan tahay inaan sameyno labadan shay ee soo socda ka hor daabacaadda:
Marka hore, khadk ka hor si loo yareeyo xaddiga biyaha, maxaa yeelay cufnaanta qaabeynta kala duwani way ka duwan tahay, baahida biyaha ayaa ka duwanaan doonta.
Marka labaad, cufnaanta aagga baarka calaamaddu waa inuu ku dhex jiraa heerka caadiga ah (daabacaadda afar-midab, Y waa 0.85 ~ 1.10, M waa 1.25 ~ 1.50, C waa 1.30 ~ 1.55, K waa 1.40 ~ 1.70).
Sababta loo hubinayo labada qodob ee kor ku xusan waa in haddii qadarka khadka qaybta ugu dambeysa ee nool uu aad u weyn yahay, kan nool ee hadda jiraana uu aad u yar yahay, biyuhuna aan hore loo dhimin ka hor intaan khadku la saarin, markaa midabka Saxiixu maahan midabka midabka caadiga ah gebi ahaanba, waana qasab inuu isbeddelo inta la daabacayo. Oo sidaas darteed xaddiga khadku qaabku ma socon doono, wuxuu si tartiib tartiib ah ugu dul dhisi doonaa liiska oo si tartiib tartiib ah emulsified, rooga biyaha ka dib markii wasakhda dul sabaynaysa ay adag tahay in laga takhaluso, iyo daabacaadda isla xaddiga buufin budo noqon doonaa dheg. Hawl wadeenada iyada oo loo marayo rogaalka rullaluistemadka khariidada ee dhacaya markii dhawaqa "yi yi", ama khadadka duubka ee galaya oo dhalaalaya ay xukumi karaan xaaladda.
Sidaa darteed kabtanka daabacaadda kahor muunadda calaamadda waa inuu sameeyaa caado wanaagsan oo ah yareynta biyaha, oo lagu arkay geeddi socodka socodsiinta nooc ka mid ah warqadda iyo joogitaanka wadajirka ah ee wadajirka ah ee daasadda, illaa ay kordhaan biyaha si tartiib tartiib ah looga tirtiro sabaynta wasakhda ah, ka dibna calaamadda cufnaanta waxay u dhigantaa heerka, khadkuna wuxuu waafaqayaa macnaha dhabta ah, "iyada oo khadadka ugu yar ee daabacan heerka ugu hooseeya ee daabacaadda biyaha" aragtida, noolaanshahaani wuxuu noqon doonaa mid aad u fudud in la sameeyo xasilloonida khad, fududahay in la xakameeyo.
Sidoo kale, sanduuqa hadiyaddu ma lahan wax daabicis ah, laakiin waxaan u astaydin karnaa sanduuqyo hadiyadeed oo kala duwan iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, noocyada sanduuqyada kala duwan iyo midabada hodanka ah, daabacaadda si adag u hubi midabka khadku, waa soosaarkii ugu dambeeyay ee qancinta macaamiisha shuruudaha lagama maarmaanka u ah sanduuqa hadiyadda.
Qodobkani wuxuu dhex maraa xasiloonida khadk oo dhan, maxaa yeelay kaliya warqadda feida ee xasilloon ee ku hoos jirta xasiloonida, midabku wuu sii jiri karaa. Haddii quudinta iyo hagaajinta aan habboonayn, baabuur madhan iyo caajis, iyo labaduba sababi karaan khadku aanu xasilloonayn, sidoo kale waraaqo badan ayaa lumin doona, haddii ay dhacdo warqad weyn oo elektaroonig ah (warqad guud ahaan ka hooseysa 100 g / m2), way fududahay in la muujiyo feerka iyo warqadda sharciyeynta halkii aad ka sugi lahayd dhacdo, waa inay ka fekertaa xoogaa hab ah oo lagu kordhiyo qoyaanka hawada, oo la dul dhigo feeda warqadda feida, la baabi'iyo usha birta korantada si looga takhaluso korantada ma guurtada ah.
Tayada qaybaha nool way kala duwan tahay, daabacadduna waxaa laga yaabaa inay saddex ama in ka badan gasho u yeelato mashiinka wax lagu daabaco (qaybaha yar ee nool ayaa badiyaa ah qaansooyin jaban, halka kuwa qaaliga ah la soo dejiyo). Kabtan u ah adeegsiga sifooyinka khadku waxay leeyihiin fahan faahfaahsan iyo hanashada.
Sida khad qalalan oo deg deg ah marka la eego macaamiisha sida waqtiga dhimista ama waqtiga dheer, si dhakhso leh u qalalan, khad daabacaadda ayaa mar kale iftiin soo diri doona, iyo xilliyo kala duwan, xaalado kala duwan oo heer kulka ah, khadku wuxuu ka tarjumayaa naftiis kala duwan, sidaa darteed kabtanka ayaa u baahan waxqabadka kala duwan ee khadka, doping ama saliida qalalan ee wax lagu shubo, ama iyadoo la xakameynayo heerkulka iyo huurka si loo xakameeyo u nuglaanta khadadka.
Soosaarayaal badan ayaa soo saara kaydka, laakiin waxaan iibsannaa oo keliya maaddooyinka nooca loo yaqaan 'brand inks'. Sanduuqyo badan oo hadiyadeed ah waxay u isticmaalaan midabka pantone qaabkooda. Midabada qaar waa kuwo xasaasi ah waxayna soo saari doonaan farqiga midabka iyadoo loo eegayo isbeddelada deegaanka.
Tayada waraaqaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara xasiloonida khad daabacaada. Haddii aad la kulanto tayo liidata, oo sahlan inaad hoos u dhigto warqadda, iyadoon loo eegin sida loo xakameeyo, ma ilaalin karto xasilloonida khadka. Haddii ay dhacdo in warqadda aan la beddeli karin, tallaabooyinka soo socda ayaa la qaadi karaa.
1) Ku tirtiro dhinacyada warqada maro qoyan si aad uga saarto cirifka warqada dhogorta ah ee ay keentay mindi goynta afku.
2) in lagu daro qaddar ku habboon oo lagu daro khadadka waa laga saari doonaa, si nafwaayay u u yaraado, khadka dusha ka sameysan warqadda dhogorta ah ee dhogorta leh ayaa ka sii fiicnaan doonta.
3) Marka tirada qaybaha nool ay badan yihiin, isku xigxiga midabka ayaa la tixgeliyaa (iyada oo aan saameyn ku yeelan midabka ugu dambeeya). Khadka yar ayaa la dhigayaa dhanka hore khadki weyna waxaa la dhigayaa kooxda midabka dambe. Sidan oo kale, markii kooxda koowaad ama labaad ee warqad lagu daabaco khad yar oo shaashad fudud la dhigo, ifafaalaha timo luminta dusha sare ee warqadda si weyn ayaa loo horumarin doonaa.
4) Iska yaree cadaadiska daabacaadda, si macquul ah u qorshee waqtiga nadiifinta buste, buste kasta oo nadiifinta ka dib, dhig warqad dheeri ah (dhinac daabicis ah oo aan u jeedin) daabacaadda tijaabada ah, taas oo ka ciyaari doonta doorka hakin ee habka daabacaadda dambe ee khad khafiif ah, sidaa darteed in heerka diidmadu hoos u dhacdo.
Sidoo kale, looxa waraaqaha iyo warqada kraft ee loo adeegsaday sanduuqan hadiyadaha ah waxaa iibsaday soo saaraha oo sanado badan nalashaqeeyay. Tayada warqaddu kama muuqato banaanka, gaar ahaan sabuuradda cawl, waxay u muuqataa mid banaanka ka wanaagsan, laakiin xudunta ayaa aad u liidata. Marka waxaan kaliya ka iibsanaa alaabta ceyriin shirkadaha wax soo saara ee aan ku kalsoon nahay. Si kastaba ha noqotee, iyada oo deegaanka uu sii xumaanayo, wacyiga dadka ee ilaalinta deegaanka ayaa sii xoogaysanaya. Kaliya sanduuqyada hadiyadaha ee tayada wanaagsan ayaa mudan in loo diro asxaabta iyo qaraabada.
Naqshadaynta midabka asalka ah
Hayso midabka asalka ah ee sanduuqa hadiyadaha, jawi ahaan u fiican.
Waxyaabaha aan xayndaabka lahayn.
Ma jiro wax qaybsanaan ah oo ku dhex jira sanduuqa hadiyadda, markaa waad dhigi kartaa hadiyadaha meel kasta oo aad jeceshahay.
Hore: Biyuhu, filimka fudud ama waraaqaha dhejiska daabacan ee matoorka leh duub
Xiga: Sanduuqa warqadda ee daryeelka maqaarka waxaa lagu dhejiyaa sanduuqa nooca buugga PVC
Khaanadaha Kaydinta Qurxinta
Kaarboor adag oo dib loo cusboonaysiin karo ubax ubaxa Bo ...
daabacaadda xirfadeed sanduuqa wiish baako hadiyad cas ...
laba jibbaaran afar geesle fikradaha farshaxanka ...
Alaabada cusub ee jaban ee tafaariiqda dib loo warshadeeyay ...
Daabacaadda xirfadle dhalaalaya ganaax pac hadiyad madhan ...